Cité Ankatso II: nirehitra ny Bloc Amicale II, mpianatra 70 indray traboina | NewsMada
Vao ny herinandro teo no nirehitra ny trano fonenan’ny mpianatra ao amin’ny Oniversite Maninday Toliara. Nirehitra koa afakomaly alina, tokony ho tamin’ny 11 ora sy 30 mn, ny toeram-ponenan’ny mpianatra ao amin’ny Bloc Amicale II, Cité Ankatso II…
Fahavoazana iray lavaka ny an’ireo mpianatra niharam-boina nandritra ny haintrano mahatsiravina, teny amin’ny cité Ankatso II, afakomaly omaly alina. Ankoatra ny trano kila hotohoton’ny afo, lasa lavenona avokoa ny fitaovam-pianaran’ireo mpianatra, eny hatramin’ny diplaoma aza ho an’ireo mpianatra sasany. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny afo fa araka ny fanazavana voaray teo anivon’ny sampana mpamonjy voina, fipoahana herinaratra no nitarika ny firehetana. Raha ny antontanisa voaray, miisa 70 eo ho eo ireo mpianatra tsy manan-kialofana sy rava fananana vokatr’ity fahamaizana ity. Fotoana fohy, taorian’ny fahamaizana, tonga teny an-toerana ny sampana mpamonjy voina nanao ny asam-pamonjena. Nanano sarotra ny famonoana ny afo noho ny tsy fahampian’ny rano nampiasain’ireo mpamono afo. Teo koa ny tsy fisian’ny vavam-pantson-drano fakana rano rehefa misy fahamaizana toy izao. Na teo aza izany, tsy nisy kosa ny naratra na aina nafoy nandritra ny firehetan’ny trano.
Nirehitra koa ny sekolin-dry masera ao Manjakandriana
Fa may tamin’ny ampahany koa ny sekolin’ny masera Notre – Dame de Lourdes ao Manjakandriana, ny asabotsy teo ihany. Ahina ho fipoahana herinaratra koa no nitarika ny firehetan’ny afo. Olana ho an’ny kaominin’i Manjakandriana ny tsy fananan’izy ireo mpamonjy voina ka nitarika ny fiitaran’ny afo. Ny fokonolona tao an-toerana niaraka tamin’ny mpitandro filaminana no nifanome tanana niaraka tamin-dry masera namono ny afo ka mba tsy niitatra. Naharitra adiny telo mahery ny famonoana ny afo, voafehin’ny fokolona sy ny mpitandro filaminana ihany izany. Levon’ny afo tao anatin’ny fotoana fohy ny sekoly ka isan’ireo voa mafy tamin’izany ny tao amin’ny kilasy ambaratonga faharoa. Tsy voakasiky ny afo kosa ny tao amin’ny Lycée.
Efa mandeha, araka izany, ny fanadihadiana rehetra momba ireto haintrano goavana ireto.